द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई न क्षतिपूर्ति, न पुनर्बहाली – HostKhabar ::
द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई न क्षतिपूर्ति, न पुनर्बहाली
सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनको ठूला सपना थिएनन्। जिन्दगी चलेकै थियो। पढाइले गति लिएकै थियो। शिक्षक भई आफ्नै गाउँको सेवा गर्ने सोच राखेका थिए उनले।
गाउँकै शिक्षक बनी बुढेसकालमा बाआमाको सहारा बन्नेबाहेक केही थिएन दिमागमा। समयले कोल्टे फेर्‍यो। उनका सपना भताभुङ्‍ग भए।
उनी अर्थात् नन्दकुमार भण्डारी, जसको लोकसेवा पास गरेर सरकारी शिक्षक बन्ने सपना अधुरै रह्यो। स्नातक सक्नेबित्तिक्कै नन्दकुमारले आफू पढेकै स्कुलमा पढाउने अवसर पाए, उनी त्यसैमा खुसी थिए।
आफ्नै गाउँ ताप्लेजुङको मिरुवाखोलामा ११ वर्ष अंग्रेजी शिक्षकका रूपमा काम गरेका भण्डारीले त्यहाँको स्कुलमा ‘प्लस टु’ ल्याउन निक्कै मेहनत गरे।
आखिर गाउँमै ‘प्लस टु’सम्मको पढाइ सुरु भयो पनि। घरनजिकैको स्कुलमै जागिर। समाजको मर्यादित पेसामा थिए उनी। छोराको काम देखेर बाआमा खुसी थिए। उनले सधै आफ्नै गाउँको सेवा गर्न पाइयोस् भन्ने चाहना राखेको थिए।
अन्तर्वार्तामा पास भएका उनको खुसीको सीमा थिएन। अब उनी पक्का ‘मास्टर’ भएका थिए। सरकारी मास्टर भनेपछि गाउँका सबैले मानसम्मान गर्ने नै भए। तर, लिखित परीक्षाको नतिजा आएकै वर्ष उनीमाथि सङ्‍कट आइलाग्यो।
उनले २०५२ सालमा ताप्लेजुङबाटै शिक्षक सेवाको परीक्षा दिए। परीक्षा दिएको ४ वर्षपछि नतिजा आयो। लिखित परीक्षामा पास भएका उनले २०५९ सालमा शिक्षक सेवाको अन्तर्वार्ता दिए।
अन्तर्वार्तामा पास भएका उनको खुसीको सीमा थिएन। अब उनी पक्का ‘मास्टर’ भएका थिए। सरकारी मास्टर भनेपछि गाउँका सबैले मानसम्मान गर्ने नै भए।
तर, लिखित परीक्षाको नतिजा आएकै वर्ष उनीमाथि सङ्‍कट आइलाग्यो। २०५६सालमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमै उनको घरमा माओवादीको आवतजावत बाक्लिन थाल्यो।
माओवादीले उनको घरमा अड्डा बनाउन दिनुपर्ने अडान राख्न थाले। तर, उनले माओवादीलाई आफूले घर दिन नसक्ने अडान लिए।माओवादीले भण्डारीलाई धम्की दिन थाले। उनलाई धम्क्याएर आफूसँगै लैजाने योजना बनाउन थाले।
तत्कालीन विद्रोही माओवादीले उनलाई अनेक तनाव दिन थाल्यो। घरमा जबर्जस्ती माओवादी आउन थाले। माओवादीको उपस्थिति बाक्लिएपछि गाउँलेले पनि नन्दकुमार माओवादी भएछ भन्ने शंका गरी नेपाली सेना÷पुलिसलाई खबर गरे।
भण्डारीमाथि ठूलो आपत आइलाग्यो। नेपाल आर्मी तथा प्रहरीले उनको खोजी गर्न थाले। एक दिन भण्डारी ताप्लेजुङको सदरमुकाममा चिया खाँदै गर्दा प्रहरीले नन्दकुमारलाई माओवादी चिन्छौ भनी प्रश्न गरे।
उनको सातो गयो। सोचेँ-अब मरिने भयो। उनी बीचको नाम ‘प्रसाद’का कारण प्रहरीबाट बचे। प्रहरीले नन्दप्रसाद भन्यो उनको नाम नन्दकुमार थियो। सुराकीले नाम बताउँदा ‘प्रसाद’ भनेकाले उनी फुत्किए।
सदरमुकामबाट हस्याङ्फस्याङ गर्दै साँझ घर पुगे। घर पुगेपछि फेरि अर्को झमेला आयो। भण्डारीले नमाने माओवादीले जबर्जस्ती भोलि आफूसँगै लैजाने खबर पठाए।
उनी फेरि आत्तिए। मुटुको चाल बढ्न थाल्यो। अब के गर्ने कसरी ज्यान जोगाउने भन्नेबारे सोच्न थाले। आफूसँग भएको घटना बुढा बाआमालाई बेलिविस्तार लगाए। बाआमाले भागेर जान भने।
‘अरुलाई अनुशासन तथा नियम-कानुन सिकाउने शिक्षक आफैंले कसरी गलत गर्नु भनेर अहिलेसम्म शान्त तरिकाले माग पूरा गर्न भनिरहेका छौं। पीडित भण्डारी भन्छन,‘उदण्ड, आन्दोलन गर्न हामीलाई पनि आउँछ। तर, सरकारले हाम्रो धैर्यतालाई कमजोरी नठानोस्।’
घरमा बस्नै नसकिने अवस्था आयो उनलाई। एकातिर माओवादीले आफुसँग लैजान खोजिरहेका थिए त अर्कोतिर आर्मी प्रहरीले खोज्न थालिसकेका थिए।
भाग्ने तर, कसरी?
खल्तीमा एक पैसा थिएन। चिनेको एकजना दिदीसँग तीन हजार रुपियाँ मागी प्रमाणपत्र बोकेर बुढा बाआमा छोडी रातारात उनी काठमाडौं हानिए।
काठमाडौं आएको एक वर्षपछि २०५९ सालमा शिक्षक सेवाको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित भयो, उनले पास भइ नियुक्ति पाए।लोकसेवा पास भएको खुसी एकातिर छदै थियो। उनी नियुक्ति पत्र लिन पुगे। तर, उनको खुसी लामो समय टिक्न सकेन।
सरकारले जुन विद्यालयबाट लोकसेवा पास गरेको हो, तीन वर्ष त्यसै स्कुलमा पढाउनु पर्ने जानकारी दिएपछि फेरि उनको सपना तुहिन पुग्यो। नियुक्ति पाएर पनि पढाउन पाएनन्। गाउँ पस्ने वातावरण नै थिएन। उनीसँग जागिर छोड्नुबाहेक केही विकल्प थिएन। उनले जागिरभन्दा ज्यानै ठूलो हो सम्झी जागिर छोडे।
काठमाडौंमा दैनिकी चलाउन ट्युसन पढाउन थाले। दुई-तीन वर्ष निजी स्कुलमा पढाए। एकदिन सरकारले द्वन्द्व विस्थापित शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्बहालीका लागि आवेदन खुलाएको खबर सुने।
उनले शान्ति समितिको सिफारिस, विद्यालयको सिफारिस, शिक्षा कार्यालयको सिफारिस लिई पुनस्र्थापनाका लागि निवेदन दिए। तर, अहिलेसम्म न त उनको पुर्नबहाली नै भएको छ न त कुनै क्षतिपूर्ति नै पाएका छन्। सरकारले पीडितलाई पुनस्र्थापना गराउने आस देखाउँछ, तर व्यवहारमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।
भण्डारीजस्तै नियुक्ति पाएर पनि काम गर्न नपाएका नेपालभरि १८ जना पीडित शिक्षक छन्। उनीहरूले सरकारसँग क्षतिपूर्तिका साथै पुनर्बहालीको माग गरिरहेका छन्।
पीडितको सङ्‍गठन द्वन्द्वपीडित शिक्षक केन्द्रिय सङ्‍घर्ष समितिले बारम्बार ज्ञापनपत्र बुझाए पनि अहिलेसम्म सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
२०६३ साल मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको ८ नम्बर बुँदामा द्वन्द्वपीडित, विस्थापित व्यक्तिको ससम्मान पुनस्र्थापना गरिनुपर्छ भनी व्याख्या गरिएको छ।
तर, सरकारले पीडित शिक्षकलाई गुमराहमा राख्ने काम गर्दै आएको छ।
२०६९ साल मङ्सिर २८ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण विस्थापित भएका र सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्नका लागि पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश जागेश्वर सुवेदीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो।
२०७३ साल मङ्सिर२६ मा शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधन सहित) को दफा १६ को (६) को उपदफा(३)बमोजिम राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारणबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानबिन गर्न पुनरावेदन अदालत पाटनका पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा फेरि समिति गठन गरियो।
जाँचबुझ समितिले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन अनुसार अनुसूची-३(क)मा २ सय ३५ स्थायी,अनुसूची-३(ख)मा १८ जना स्थायी करार तर हाजिर हुन नसकेका अनुसूची -४ अनुसार ६० वर्ष उमेर नाघेको र मृत्यु भएका ४१ जना अनुसूची- ५मा २ सय ८४ जना अस्थायी गरी ५ सय ३५ जनालाई क्षतिपूर्तिसहित पुर्नहाली गर्न भनेको छ।
अनुसूची- ६ मा २ सय ३० जना शिक्षकलाई प्रतिवेदनको कार्यदेशभन्दा बाहिर रहेको उल्लेख गरेको छ। समितिले उमेर नाघेका र मृत्यु भएका शिक्षकको घरपरिवारलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
द्वन्द्वपीडित शिक्षक केन्द्रीय सङ्‍घर्ष समितिका संयोजक तथा पीडित सर्पराज सिंहले सरकारले कानुनमा भएको र आफ्ना जायज माग सम्बोधन गर्नसमेत ढिलाइ गरेको गुनासो गरेका छन्।
‘हामी द्वन्द्वपीडित मात्र नभइ राज्यपीडित पनि हौं, गणतन्त्र प्राप्तिमा हाम्रो पनि भूमिका छ, परिवर्तनकै लागि हामीलाई गरिखानबाट वञ्चित गरिएको हो। सिंहले भने, ‘द्वन्द्वकालको समस्या गणतन्त्रसम्म पुग्दासमेत समाधान भएन। हाम्रो सपनामाथि खेलबाड गरियो। तर, अहिलेसम्म कसैले चासो देखाएन।’
समितिले देशको सीमा विवादका कारण सङ्‍घर्षका कार्यक्रम स्थगित गरे पनि अर्को निर्णय नहुँदासम्म माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने बताएको छ। गणतन्त्रका लागि जीवन र जागिर गुमाएका शिक्षकको धैर्यताको बाँध टुट्न नदिन समितिले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।
सिंह भन्छन्- ‘माग पूरा नभए देशभरका सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडित शिक्षक आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं।’ समितिले सरकार, पार्टी, वरिष्ठ नेता तथा सरोकारवाला निकाय सबैलाई भेटेर माग पूरा गर्न आग्रह गरिसकेको बताएको छ।
द्वन्द्वपीडित शिक्षकको जागिर गएको २० वर्ष पूरा भइसकेको छ। मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको पनि १२ वर्ष पुगिसकेको छ।
यस्ता छन् माग:
१. २०५२ सालको जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनका क्रममा र २०५२ पूर्व राजनीतिक आस्थाको आधारमा पेसाबाट विस्थापित शिक्षकको पुनर्बहाली गर्नुपर्ने।
२. शिक्षक सेवा आयोग २०५२ पास गरेर स्थायी नियुक्ति पाए पनि द्वन्द्वको कारण नियुक्ति बुझ्न नपाएका र लिखित परीक्षा पास भई अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन नपाएकालाई पुनः सिफरिस गर्नुपर्ने।
३. विस्थापित भएको अवधिदेखि हालसम्मका सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने।
४. द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका र मारिएका शिक्षक कर्मचारीको सेवासुविधा एक तह बढुवा गरी नेपाल प्रहरीका परिवारले पाएको पेन्सन र राहतसरह व्यवस्था गर्नुपर्ने। नेपालन्युज